स्मरण शक्ति बढाउन देखि मिर्गौलाको पत्थरी सम्म हटाउन यसरि मद्दत गर्छ हरीयो पालुंगो ! नछुटाई पढ्नुहोला – Annapurna Daily
स्मरण शक्ति बढाउन देखि मिर्गौलाको पत्थरी सम्म हटाउन यसरि मद्दत गर्छ हरीयो पालुंगो ! नछुटाई पढ्नुहोला
On Aug 19, 2021 1,706
एजेन्सी । स्मरण शक्ति बढाउन देखि मिर्गौलाको पत्थरी सम्म हटाउन यसरि मद्दत गर्छ हरीयो पालुंगो ! पालुंगोको साग स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो गाउ घरमा फलाइने तरकारी हो ।
पालुंगोको सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोगबाट बच्न सकिन्छ । विषेश गरेर जिउमा रगतको कमी भएकाहरुका लागि मात्र पालुंगो हि-तकारी हुन्छ । १ सय ग्राम पालुंगोको साथमा २६ किलो क्यालरी उर्जा पाइन्छ ।
पालुंगोको सागको रसमा सिधेनुन मिलाएर नियमित पिउनाले दम तथा स्वास प्रस्वासका रोगीलाई फाइदा पुग्छ । नियमित रुपमा पालुंगोको साग खानाले कारण स्मरण शक्ति बढ्ने र आयोडिनका कारण दिमागी थकान समेत कम हुन्छ ।
जण्डिसका रोगीले पालुंगोको साग काँचै चपाउनु समेत निकै फाइदाजनक हुन्छ । रक्तचाप कम हुने समस्या भएकाहरुले दिनहुँ पालुंगोको साग सेवन १ सय ग्राम पालुंगोको साथमा २६ किलो क्यालरी उर्जा पाइन्छ ।
पालुंगोको सागमा २ प्रतिशत प्रोटिन, २.९ प्रतिशतकार्बोहाइड्रेट, पाइन्छ । त्यस्तै जम्मा ०।७ प्रतिशत चिल्लो, ०।७ प्रतिशत लवण तथा ०।६ प्रतिशत फाइबर पाइन्छ । पालुंगोको सागमा क्याल्सियम, फलाम मात्र होइन भिटामिन ए, बी, सी जस्ता विभिन्न भिटामिन समेत पाइन्छ ।
त्यसैले पालुंगोलाई जिउको संरक्षक खाद्य पदार्थ समेत भनिन्छ ।पालुंगोको सागको रसलाई नियमित रुपमा नरिवल पानीमा मिलाएर हरेक विहान पिउनाले मृगौलामा परेको पत्थरी हटाउन सहयोग पुग्छ । पालुंगोको सागको रसमा सिधेनुन मिलाएर नियमित पिउनाले दम तथा स्वास प्रस्वासका रोगीलाई फाइदा पुग्छ ।
नियमित रुपमा पालुंगोको साग खानाले कारण स्मरण शक्ति बढ्ने र आयोडिनका कारण दिमागी थकान समेत कम हुन्छ । जण्डिसका रोगीले पालुंगोको साथ काँचै चपाउनु समेत निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
रक्तचाप कम हुने समस्या भएकाहरुले दिनहुँ पालुंगोको साग सेवन गर्नुपर्छ । थाइराइडको समस्या भएका हरुका लागि समेत पालुंगोको सागको सेवनले फाइदा गर्छ ।